गर्मी मा मिति खाने का फाइदाहरू के हुन्? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
गर्मी मा मिति खाने का फाइदाहरू के हुन्?
अटोमोबाईलहरू महिन्द्रा थार बुकिंग Six०,००० माइलस्टोन केवल छ महिनामा पार गर्नुहोस्
घर स्वास्थ्य पोषण पोषण ओआई-नेहा घोष द्वारा नेहा घोष १० मे, २०१ on मा मिति, मिति दूध संग दूध। स्वास्थ्य लाभ | मिति र मिति दुधमा उमालेर खानुहोस्, उत्कृष्ट फाइदाहरू पाउनुहोस्। बोल्डस्की
गर्मीहरू पहिले नै सेट अप गरिसकेका छन् र तापक्रम उच्च बढ्दै छ। यो समय हो जब तपाईं चिसो र हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थहरूमा लोड गर्नुपर्छ। मिति शरीरमा तातो उत्पादनको लागि परिचित छ यसैले यो जाडोको हिसाबले राम्रोसँग उपभोग गरिन्छ भनेर जानिन्छ। त्यसो भए, तपाइँ गर्मी समयमा मिति खान सक्नुहुन्छ?
मिति पेटको क्यान्सर रोक्न उपयोगी मानिन्छ। इस्लामको अनुयायी र उपवास बसेका मानिसहरूले पानीको साथ खजूर खाएर उपवास तोड्दछन्।
मिति एक मीठो र बहुमुखी खाना हो कि पाचन प्रक्रिया को नियमन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। साथै, ती उपभोगको आधा घन्टा भित्रमा उर्जाको स्तर बढाउन सक्छन्। अमेरिकी क्यान्सर समाजले प्रति दिन २०--35 ग्राम आहार फाइबर सेवन गर्ने सिफारिस गर्दछ।
के तपाईंलाई थाहा छ प्रति दिन एक मिति उपभोग गर्दा तपाईंलाई आँखाको उचित स्वास्थ्य कायम गर्न मद्दत गर्दछ? हो, यो सत्य हो कि रातको अन्धोपनको समस्याबाट जोगाउन मितिहरू निकै प्रभावकारी हुन्छन्।
मिति खाने स्वास्थ्य लाभ
१. हड्डीलाई बलियो बनाउँछ
मितिमा उपस्थित खनिजहरूको महत्त्वपूर्ण मात्रा हड्डीहरूलाई सुदृढ पार्न र अस्थिरोग जस्तो पीडादायी र दुर्बल रोगहरू विरुद्ध लड्नको लागि राम्रो छ। मितिहरु मा सेलेनियम, मैंगनीज, म्याग्नीशियम र तामा हुन्छ, ती सबै स्वस्थ हड्डीको विकास र शक्ति को लागी आवश्यक छ। तपाईंको हड्डीहरूलाई बढावा दिन मितिहरू खान सुरु गर्नुहोस्!
२. आंत्र विकारको उपचार गर्नुहोस्
मितिहरूमा निकोटिनको उपस्थिति धेरै प्रकारको आंत्र विकारहरूलाई निको पार्न लाभदायक छ। दिनहुँ मितिहरू पाउँदा रोगजनक जीवहरूको बृद्धि हुन सक्छ। यसले आन्द्रामा मैत्री ब्याक्टेरियाको बृद्धिलाई मद्दत गर्दछ। मितिमा घुलनशील र अघुलनशील फाइबर र एमिनो एसिडहरू हुन्छन्, जसले पाचनमा मद्दत गर्दछ।
गर्भवती तेस्रो त्रैमासिकको बेलामा स्थिति
Cons. कब्ज कम गर्दछ
के तपाईंलाई थाहा छ किन मितिहरूलाई रेचक खाना मानिन्छ? किनभने तिनीहरूसँग घुलनशील फाइबरको उच्च स्तर छ, जो स्वस्थ मल त्यागको लागि आवश्यक छ र यसैले, यसले कब्ज हुनबाट बचाउँछ। मितिहरू पानीमा राति भिजाउनुहोस् र भोलिपल्ट बिहान उपभोग गर्नुहोस् सबै भन्दा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न।
A. एनिमियाको उपचार गर्दछ
मितिहरूमा आइरनको प्रशस्त भार हुन्छ, जसले उनीहरूलाई एनीमियाबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि उत्तम आहार पूरक बनाउँदछ। मितिमा फलामको उच्च मात्राले तपाईंको फलामको कमीलाई हटाउनेछ यदि तपाईं रक्ताल्पित हुनुहुन्छ। यसले एनीमियाका लक्षणहरू घटाउन मद्दत गर्दछ जस्तै थकान र अल्छीको भावनाहरू बढाउँदा उर्जा र शक्ति बढाउँदै।
We. वजन बढाउन प्रोत्साहन गर्दछ
मितिहरूमा प्रोटीन, चिनी र धेरै आवश्यक भिटामिन र खनिजहरू हुन्छन्। १ किलोग्राम मितिमा 000००० क्यालोरी हुन्छ र त्यसमा क्यालोरीले वजन बढाउन चाहने मानिसहरूलाई मद्दत गर्दछ। यदि यो काँकडी पेस्टको साथ खपत भयो भने, यसले स्वस्थ शरीरको वजन कायम गर्न मद्दत गर्दछ।
Your. तपाईको उर्जालाई बढावा दिन्छ
सुस्त वा सुस्त महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? मितिहरू फ्रुक्टोज, ग्लूकोज र सुक्रोज जस्तो प्राकृतिक शर्करामा धनी हुन्छन् जसले तत्काल तपाईंको उर्जा लाई बढावा दिन्छ। यदि तपाईं सुस्त महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, दिउँसो खाजाको रूपमा मिति खपत गर्नुहोस्। साथै, जिममा कसरत गरेपछि, तपाईं थकित हुनुहुनेछ, यस्तो अवस्थामा केहि मितिहरू चाउनाले तपाईंलाई तत्काल तपाईंको ऊर्जा पुनः प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
मितिहरू स्वस्थ सुख्खा फल हुन्। पोटेशियमको एक उत्कृष्ट स्रोतको रूपमा, यसले स्ट्रोक र मुटु सम्बन्धी रोगहरूको जोखिम कम गर्दछ। साथै, मितिहरू सेवन गर्नाले शरीरमा LDL कोलेस्ट्रॉलको स्तर कम गर्दछ, जसले वजन बढाउँदछ र हृदय रोगहरू गर्दछ। तपाईको मुटु स्वस्थ राख्न हप्तामा दुई पटक मिति राख्नुहोस्।
A. एक उचित स्नायु प्रणाली राख्छ
मितिहरूमा भिटामिनको उपस्थिति उचित स्नायु प्रणाली कायम राख्नको लागि राम्रो छ। पोटेशियम एक मुख्य घटक हुनु स्वस्थ र प्रतिक्रियाशील स्नायु प्रणाली प्रबर्धन गर्दछ। यसले तपाईंको मस्तिष्कलाई सचेत पनि बनाउँदछ, त्यसैले तिनीहरूको दिमाग कडा राख्न चाहने व्यक्तिको लागि यो अद्भुत हो।
Di। पखाला लागी उपचार गर्दछ
पाकेको मितिमा पोटेशियम हुन्छ, जसले प्रभावी रूपमा पखाला नियन्त्रण गर्न सक्छ। तिनीहरू पचाउन सजिलो छ र यसले पखाला पखाला निको पार्न सक्छ। यो तिनीहरूमा घुलनशील फाइबरको कारणले हो कि तपाईंलाई पखालाबाट मुक्त पार्न मद्दत गर्दछ।
प्रति दिन कति खाने मिति?
मितिहरूले तपाईंलाई वजन बढाउन सक्ने भएकोले, जो व्यक्ति वजन घटाउने आहार योजनामा ​​छन् तिनीहरूले मध्यम मात्रामा मिति खान्नु पर्छ। तपाईसँग हप्तामा एक वा दुई पटक dates-। मितिहरू हुन सक्छन्।
के तपाई गर्मीमा मिति खान सक्नुहुन्छ?
मितिहरूले शरीरमा धेरै तातो उत्पादन गर्दछ भन्ने तथ्यलाई विचार गर्दै। सामान्यतया दुईदेखि तीन टुक्रा भन्दा बढी नलिन सिफारिश गरिन्छ। यदि एक व्यक्ति फलामको अभावको साथ पीडित छ, तब उसले वा उनी दिनमा दुई वा तीन टुक्रा भन्दा बढी उपभोग गर्न सक्दछन्। जे होस्, मितिहरू ग्रीष्मकालका लागि उत्तम खाना हुनसक्दछ, तर मध्यम परिमाणमा यो हुनु भनेको कुञ्जी हो। गर्मीमा मितिहरू खाँदा सन्तुलित दृष्टिकोण राख्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई यो लेख पढ्न मनपर्‍यो भने, यो तपाईंको प्रियजनहरूसँग साझा गर्नुहोस्।
शुक्रबार कसरी लक्ष्मीको पूजा गर्ने
कसरी घरमा पातलो खुट्टा प्राप्त गर्ने
गर्भावस्थामा आंवला खाने को लाभ
झींगा मराठिको भाषामा फ्राई रेसिपी
कसरी धेरै छिटो न nailsहरू बढाउने
वजन घटाउन को लागी सूजी राम्रो छ
कसरी कपाल नरम र चिल्लो बनाउन